Ubomi beenkonzo zokuhlamba iimpahla?
Isisombululo sokuhlenga izixhobo zokuhlamba impahla yokuhlamba isisetyenziselwa ukuhlamba isisombululo sokuhlamba, ukucima i-liquid kunye nokomisa ukuhlengahlengiswa kunye nokuhlanjululwa kokuhlamba, ukuhlamba imishini ukuqaphela umsebenzi wokubuyisela. Iyasetyenziswa ngokubanzi kwindawo yokuhlamba kwimveliso yembatho. Ukunyuka ngaphezulu kweevenkile, unombuzo: izixhobo zokuhlamba iimpahla yindlela ubomi?
Ubukhulu obuhlukeneyo bokuhlamba iimpahla kunye nokuhlamba iimpahla ekuqaleni kokukhetha nokuthenga kubaluleke kakhulu.
Ukuba i-drive iyindawo yokuhlamba enkulu, ngoko kuba abaqhubi bethu bafumana inkxaso enjalo yemali, iingcebiso okanye bakhethe kwaye bathenge umshini wokuhlamba ophezulu, umgangatho omhle, usebenze lula, uhlala njalo, emva kokugcina iindleko ezininzi zokugcina. Ukuba ivenkile encinci, unokukhetha uhlobo oluthile oluchanekileyo lomshini wokuhlamba, kuba unokuba yiminyaka embalwa ukwandisa isitolo, kufuneka uguqule umatshini wokuhlamba ophezulu. Kukho, kungakhathaliseki ukuba bunjani ubungakanani bokuhlamba impahla, kungakhathaliseki ukuba ukhethe uhlobo luni lomatshini wokuhlamba, ukugcinwa kwesondlo kubalulekile.
Izixhobo zokuhlamba rhoqo zibaluleke kakhulu, abaqhubi abanamava baya kuba bemihla ngemihla, ngeveki, kwinyanga yonyanga kunye nonyango ngamnye, abanye abaqhutyanga ukugqiba umjikelezo wokuhlamba baya kucoca umqokeleli weqhosha, ngokunjalo banokunciphisa umthwalo wepom, ukukhusela ukuphambaniswa kwempompo, ukwandisa ubomi bompompo; ukuhlamba rhoqo emva kwezihlandlo ezintathu, kucima umqokeleli we-cilia, onokuphucula ukomisa umoya wokuhamba, ukunciphisa ixesha lokumisa. Ngelo xesha, kunokunciphisa i-cilia condenser kwi-recycling of adhesion, ukunciphisa ukubola kwe-condenser. Yaye uya kujonga imihla ngemihla yamathathu, amanzi aphefumlelweyo, yongeza ioli ekucoca xa ixabiso leoli lingeneli, liza kuba ukukhusela amanzi ekungeneni kwintsimbi ye-electro-magnetic valve kunye ne-valve emoyeni, eyenza ukuhluleka kwexesha elide; amanqaku okufakela ngokwezinto ezifunekayo zomshini, ukuqinisekisa ukuba isithintelo ngasinye sithintelo, sandisa ubomi bokuthwala.
Ngoko ke, ngokuqhelekileyo, umatshini wokuhlamba umbane omkhulu okanye ubomi obude, kuba ahlale engena endaweni yawo, abavelisi nabo baqhelekile nangaloo nto engqondweni, ngoko ngokuqinisekisa ukuba yonke imfanelo, abaqhubi bethu kufuneka ungakhathazeki kakhulu malunga neengxaki zokusebenza, ujoyine i-ENEJEAN yokuhlamba, nangona kukho into engalunganga ngokukhawuleza, unokudibanisa nekomkhulu, ikomkhulu linokunceda abashishini ukuba basombulule ezi ngxaki.
Inqaku lokugqibela: Isicatshulwa semveliso yeevenk...
Inqaku elilandelayo: Indlela yokuvula i-clean clean...